Yezandla ukuze indlu ngezandla zakhe: ukudala cosiness esiyingqayizivele endlini
uhlalwe ngabantu - kuba castle yakhe ngokungagcini nje. Kusengenzeka endaweni lapho kungaba ngokwakhe, ukuba embule izwe lakhe elingaphakathi, ngaphandle kokwesaba ukugxekwa kusukela ngaphandle. Noma, kunalokho, ukubeka okudaliwe zabo obala abangane abaseduze noma izimenywa okungahleliwe - lokho ongakukhetha. Mayelana anjani yezandla ekhaya ngezandla zabo, ungenza-spare time sakho, uchaza kulesi sihloko.
Le ndoda endlini - kumnikazi umdali
Akubona bonke abafazi zithonywa iqiniso lokuthi naye yabo kungenzeka ulungise isokhethi noma ukushayela nail odongeni. Phela, iningi wobulili namandla lisebenza ngakho, nemicabango yabo Sichichima kangangokuthi zemfucumfucu ungenza "uswidi". Isibonelo yezandla esihle endlini ngezandla zakhe singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela isibani edeskini, okuyinto ingcweti kalula ukwenza abantu abavela vase ecasulayo noma ubudala ngesineke ubumba emzaneni Balakirev - nojeke ngoba ubisi kvass. Ekuqaleni ubukeka isibani esenziwe ibhokisi noma amagatsha abavamile nge screen e indima le ithunzi lelambu. Futhi ungasebenzisa njengendlela ukuma ngisho izincwadi ezindala engadingeki! Yiqiniso, ukuba kancane nakho lapho kusetshenzwa ngamapulangwe, umdali oshisekayo umklami uyakwazi ukudala nezinye yezandla ngoba indlu ngezandla zakhe. Kusukela esiwohlokile ifenisha panel kanye namabhodi, isibonelo, ungakwazi ukwakha ifenisha ehlukile noma onodoli abadala, ezemidlalo nomqeqeshi, umntwana stroller.
lokusungula Wezingane kudalwa gizmos okukhethekile ekhaya
Kungcono ukunikeza izingane ithuba futhi ukuhumusha fantasies zabo zibe ngokoqobo lapho edala ingaphakathi eziyingqayizivele ekhaya. Ungasebenzisa lawa izithombe ukunamathisela izindonga: zingabantu kufanelekile ngokumangalisayo phakathi design, uma itholakala kahle phakathi izingxenye lodonga. Ungakwazi yini ubethembe ukuthi benze izinto ewusizo nesisebenzayo endlini, okuyinto elizoba umhlobiso, futhi kube lula ekuklanyweni egumbini. Decoupage tableware, udonga amapuleti, amabhodlela nezimbiza uyonika charm esiyingqayizivele ekamelweni ekhishini. Kulula ukwenza kube nge glue hot nezinkinobho, izinkinobho, amathoyizi encane, umklami izingxenye elikhanyayo zezingane, ubuhlalu futhi ubuhlalu.
capes obumbene, imifanekiso obumbene
Futhi ngempela into engavamile ngoba indlu kungenziwa axhunyiwe. Mayelana lace napkins futhi capes ukwazi pheze konke. Kodwa ababona wabopha imifanekiso nodonga Trophies? Noma ezithambile downy cactus ebhodweni eyenziwe ukukhilosha ntambo? Ukuqala lokhu engqondweni zokudala ukubeka Portuguese Isazi - umculi nomklami Dzhoan Vaskonselos. It hhayi kuphela ibophezela umnikazi encane izinto kancane ekhaya, kodwa ngisho ukwazi ukwenza bese efakwa Versailles (France), kanye Palazzo Grassi (Venice) yobuciko emikhulu. Ngokwesibonelo, abopha lace upiyano. Kubukeka nenhle ngempela ngisho omkhulu! Ngaphezu kwalokho, nomchilo inhlukano kucuketse uligqolozele kuye ku ebuntwaneni elikude, ekhumbula ugogo ezinhle noma cottage angadle ngabuhle obutheni cute, ekubunjweni isimo izinkumbulo ezimnandi futhi unikeza isimo sengqondo esiqondile.
ifenisha wathungela - stylish, yokuqala, fabulous futhi ethokomele
Kristen Mayndertsma waseHolland washo nokungaphezu kwalokho Dzhoan Vaskonselos. Ekhuphuka kanye futhi basungula indlela yokukhiqiza ifenisha wathungela. Of ekhethekile uvolo uqweqwe usebenzisa omkhulu hook needlewoman kudala imikhiqizo yayo enhle kakhulu: izihlalo ukunethezeka Ottoman ukhululekile, amatshe voluminous futhi omatilasi esithambile. Eqoqweni wakhe kukhona ngisho ezifana yezandla ethile cishe ayinakwenzeka ekhaya, ngezandla zabo ezihlobene, njengoba amatafula bele. Endlini, izinto lapho abathanda futhi umcabango wenza izandla abahlala kuwo abantu zihlale ukhululekile futhi ujabule. Futhi noma ubani ozama ukuba enze okuthile ekhaya lakho, ngokuqinisekile ukuthi bakuthole wokuzilibazisa entsha ethokozisayo.
Umshini senziwa lamaswidi. Funda ukwenza izandla zakho siqu
Indlela yokwenza imvunulo bug khona ngithanda umfana othile, izandla zakhe
Masters yezandla zabo cute frog imvunulo
Indlela ukuqeda ezibomvu efulethini ngokushesha futhi unomphela?
Indlela yokuqala inikela ngemali ukuze wejubili imibono
Umsuka amagama nabasePoland: version of the edumile hhayi ngakho
Cartage: kusukela ezinsukwini zokuqala kuze kube manje